NISA Oo Xabsiga Dhigtay Gudomiyaha Iyo Kuxigenka Rugta Ganacsiga G/Banadir Oo Al-shabaab Looga Shakiyay. – Heemaal News Network
Ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa galabta magaalada Muqdisho ku xiray Gudoomiyaha rugta Ganacsiga iyo Warshadaha gobolka Banaadir iyo kuxigeenkiisa.
Wararka laga heley ciidamada NISA ayaa sheegaya in la xiray su’aalana weediinaya Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Gobolka Banaadir Axmed C/llaahi Xasan iyo kuxigeenkiisa Axmed Jimcaale.
Xubnahan ayaa lagu tuhmayaa in wada shaqeyn dhaw la eeyihiin Xarakada Al Shabaab, waxaana horey qaar kamid ah ganacsatada gobolka Banaadir oo magacooda qariyay sheegeen in magacaabista xubnahan ay ka dambeeyeen kooxda Al Shabaab.
Idaacada VOA ayaa dhawaan baahisay warbixin sheegeysa in magacaabista Gudoomiyaha Rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo kuxigeenkiisa ay ka dambeeyeen Al Shabaab oo dano badan ka leh ganacsatada gobolka.
Xubnahan la xiray ee tuhunka soo galay ayaa la sheegay in la geeyay goob gaar ah oo lagu baarayo, waxaana xubnahan la sheegay in xiriir dhaw la leeyihiin hoganaka Al Shabaab sida ay sheegeen ganacsato magacooda qariyay oo la hadlay VOA.
Al Shabaab ayaa saameyn badan ku dhax leh ganacsiga gobolka Banaadir , waxaana inta badan goobaha ganacsi ee gobolka Banaadir Al Shabaab ka qaadaan lacago canshuuro ah iyo kuwa Zako ah.